ချစ် သော ဇနီး – Hlataw.com
ဖစ်ရပ်မှန်……… လွန်လေပြီးသော နှစ်များစွာ အချိန်က… ” ဟယ်လို….ဟယ်လို….. အေး ကြားလား သူငယ်ချင်း” ” အေး…ကြားတယ်..” ” မင်းဒီညနေအားလား” “ဘယ်ရောက်နေလဲ..အားတယ်” ” ဒါဆိုလာခဲ့ကွာ…တောင်ဥက္ကလာက ဟိုတခါ ထိုင်ဖူးတဲ့ ဆိုင်ကို” ” အေးအေး…၇ နာရီလောက်လာ ခဲ့မယ်” “မိန်းမရေ…ရေချိုးတော့ကွာ ၅ နာ၇ီတောင်ထိုးပြီ” ကျနော့်မိန်းမကတီဗီကြည့်နေရင်း လှမ်းပြောတယ်လေ။ “ဘယ်သွားအုံးမလို့တုန်း…သောက်ချင်အိမ်မှာဘဲ သောက်ပါလားကိုရယ်” “အာ…ဒီနေ့အလုပ်ကိစ္စပြောစရာရှိတယ်… ဟိုကောင်နဲ့လဲ ချိန်းထားလို့… အေးဆေးလဲ ဆိုင်မထိုင်ရတာကြာပြီကွာ… လိုက်ခဲ့..” မိန်းမကတီဗီကြည့်နေရာကနေထပြီး…. “ဒါဆိုလဲခဏစောင့်.. ရေချိုးပြီး အင်္ကျီလဲလိုက်အုံးမယ်” ဟုပြောကာ ထမိန်စွန်တောင်ဆွဲပြီး အိမ်နောက်ဖေးကို ၀င်သွားတယ်။
၂၅ မိနစ်လောက်ကြာတဲ့ အချိန်မှာ သူရေချိုးခန်းကထွက်လာပြီး ရေသုပ် နေတော့ ကျနော်လဲ ရေချိုးခန်းဝင်ပြီး ရေချိုး လိုက်တယ်။ ကျနော်ရေချိုးခန်းက ထွက်လာတော့ သူအ၀တ်ဘီရိုကို ဖွင့်ပြီး ၀တ်စရာတွေရွေး နေတယ်လေ… ကျနော်က ရေသုပ်ရင်း……. “မိန်းမ ဘာတွေရှာနေတာလဲ” “ဘာဝတ်ရမလဲရွေးနေတာ” “ဖယ် ဖယ်…ကိုရွေးပေးမယ်” ဆိုပြီးသူ့နေရာမှာဝင်ထိုင်ရင်း တခုခြင်းရွေးပေးလိုက်တော့တယ်။ ပန်တီနီနီအရဲလေးရယ်…. ဘရာအနက်ကလေးရယ် ကိုရွေးပြီး သူ့ဘက်လှမ်းပေးလိုက်တော့.. “ဟင်……ဒါဘဲဝတ်သွားရမှာလား” ဆိုပြီးသူကလှမ်းယူရင်း ရယ်နေတယ်လေ။
“၀တ်ချင်လဲ ၀တ်သွားပေါ့…ဟိုကောင်က နင့်ကို အသဲယားပြီး ဆွဲလုပ်လိမ့်မယ်” ဆိုတော့ သူက ရယ်ဖြဲဖြဲနဲ့ “လုပ်ကြည့်ပါလား” ဆိုပြီး ဘရာနဲ့ပန်တီလေးကိုဝတ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ဂျင်းဘောင်းဘီလေးရယ် လက်တစ်လုံး အင်္ကျီလေးရယ် ၀တ်ပြီးအခန်းထဲက ထွက်လာတယ်။ “အဆင်ပြေပါ့မလားကို…အေးမလားသိဘူး… အပေါ်က ရှပ်အကျီတခုထပ်ဝတ်လိုက်မယ်.. အိုက်မှ ချွတ်ထားလိုက်မယ်” “အဆင်ပြေသလိုလုပ်ကွာ ကြာနေပြီ သွားမယ်” ဆိုပြီး ကားသော့ယူကာ ထွက်လာလိုက်တယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ ဆိုင်ရောက်တော့ ၂ ယောက်သားထိုင်ပြီး စားစရာ သောက်စရာတွေမှာရင်း သူငယ်ချင်းအလာကို ထိုင်စောင့်နေလိုက်တာပေါ့။
၇ နာရီထိုးခါနီးမှာ သူငယ်ချင်းက ရောက်လာ တယ်။ “စောင့်နေတာကြာပြီလား… ငါအလုပ် သိမ်းနေရလို့ ကြာသွားတယ်… ဒါတောင် ကမန်းကတန်းထွက်လာရတာ.. ကားက ဘာဖြစ်နေမှန်းမသိလို့ တက်ဆီ နဲ့အခုလာတာ” ဆိုပြီးသူငယ်ချင်းကပြောတယ်။ “အေး…ကောင်းတယ်…မင်းကသောက်ပြီး စောက်ရမ်းမောင်းတာ.. ငါတို့ရောက်နေတာ သိပ်တော့ မကြာသေးပါဘူး..မင်းဘီယာဘဲလား” “ဘီယာမသောက်ချင်ဘူး… ရှကီဘဲထုတော့မယ်.. မင်းမိန်းမရော ဘာသောက်မလဲ” ဆိုပြီးသူကမေးတော့ မိန်းမက “မသောက်ပါဘူး..ကိုလာ ဘဲသောက်နေတာ” ဆိုပြီးပြန်ပြောလိုက်တော့ကျနော်က “မိန်းမလဲ တခုခုရောသောက်လိုက်လေ” ဆိုပြီးပြောမိလိုက်တော့ မိန်းမက “ဒါဆို ကိုလာ ထဲ အရက်နဲနဲရောသောက်မယ်” ဆိုပြီးပြောတယ်။
အဲ့တာနဲ့ ကျနော်တို့ တူတူ အလုပ်အကြောင်း ပြောရင်း သောက်ကြရင်း ည ၁၀ နာရီလောက်ရောက်တော့ သူငယ်ချင်းက “ကာရာအိုကေ သွားဆိုရအောင်ကွာ” တဲ့။ ” အေး…မဆိုရတာကြာပြီ သွားကြရအောင် မိန်းမ” ဆိုပြီးပြောလိုက်တော့ သူက “အင်း…သွားလေ ” တဲ့။ ပိုက်ဆံတွေဘာတွေရှင်းပြီး ကာရာအိုကေကို ချီတက်လာကြတာပေါ့။ ကာရာအိုကေရောက်တော့ သူငယ်ချင်းကို….. ” မင်းဆော်ခေါ်ချင်ခေါ်လေ” လို့ပြောလိုက်မိတယ်။ သူငယ်ချင်းကလူပျို။ “မခေါ်ချင်ပါဘူးကွာ…ကောင်မတွေကရှုပ်တယ်.. ကိုယ့်တွေဘာသာကဲမယ်” ဆိုပြီးပြောတော့ ကျနော်တို့ ၃ ယောက်ထဲတစ်ခန်းထဲမှာ ဘီယာမှာလိုက် သောက်လိုက်ကြဆိုလိုက်ကြနဲ့ တော်တော်ပျော်ဘို့ ကောင်းပါတယ်။ မိန်းမနဲ့သူငယ်ချင်းနဲ့ကလဲ တူတူထဆိုတဲ့အခါဆိုကြတယ်။
စုံတွဲသီချင်းတွေ ဘာတွေဆိုရင်း တခါတလေ မိန်းမပုခုံးပေါ် သူငယ်ချင်းက လက်တင်ပြီးလဲဆိုတာပေါ့။ မိန်းမထဆိုနေတဲ့အချိန်မှာ သူငယ်ချင်းက တိုးတိုးလေးနဲ့ ” ဆောရီးနော်…ငါဘာစိတ်မှမရှိဘူး… ဒီတိုင်းဆိုတာ” ဆိုပြီးကပ်ပြောတယ်။ ကျနော်က “ရပါတယ်ကွာ..ညီအကိုတွေဘဲ လီးစကားတွေ လာပြောနေတယ်” ဆိုပြီး စနောက်ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ ၁၂ နာရီလောက်ကြတော့ “ပြန်ကြရအောင်” ဆိုပြီး သူငယ်ချင်းကပြောတယ်။ ကျနော်က “ပြန်ချင်လဲပြန်ကြရအောင်… ပိုက်ဆံရှင်းပြီးလိမ့်မယ်” ပြောပြီး ဆိုင်ပြင်ထွက်လာကြတယ်။ ဆိုင်ပြင်ရောက်တော့ သူငယ်ချင်းက ” တက်ဆီ စောင့်ငှားပြီးပြန်တော့မယ်” ” မင်း တက်ဆီ ကဒီအချိန်ကြီးတော်တော်ကြာမှာ… ငါ့အိမ်နဲ့လဲနီးနေပြီ မနက်မှပြန်တော့လိုက်အိပ်” ဆိုပြီးပြောလိုက်တယ်။
အဲ့ဒါနဲ့တူတူ အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ကြတော့တယ်။ အိမ်ရောက်တော့ မိန်းမကို…….. “မိန်းမရေ…ရေခဲသေတ္တာထဲက အသီးတွေရယ်.. ရေခဲရယ် ယူခဲ့ကွာ” ဆိုပြီးအိမ်မှာရှိတဲ့ရှကီပုလင်းနဲ့ ဆက်တီးနေကြတာပေါ့။ မိန်းမကဘေးမှာထိုင်ရင်း တီဗီကြည့်နေတယ်။ “မိန်းမအကျီသွားလဲလေ…ကြည့်ရတာ ကြတ်လိုက်တာဟာ” ဆိုပြီးပြောတော့ မိန်းမကအိပ်ခန်းထဲထပြီး ၀င်သွားတယ်။ ကျနော်တို့သူငယ်ချင်းအကြောင်း ပြောပြရရင် ငယ်ငယ်လေးထဲက တူတူပေါင်းလာကြတာ။ သောက်တူစားတူ စော်ချတူတူဆိုပါတော့ဗျာ… ခေါ်ချတဲ့စော်တစ်ပွေထဲကိုလဲ ၂ ယောက်တူတူချဖူးတယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆက်ဆံကြတယ်။
ဒါပေမယ့် သူငယ်ချင်းက ကျနော့်မိန်းမအပေါ်တော့ အတော်ရိုးသားပါတယ်။ တခုတော့ ရှိတယ်။ တခါမှာအိမ်လာရင်းမူးမူးနဲ့ အပေါ့သွားတော့ အိမ်အနောက်ခန်းမှာလှမ်းထားတဲ့ ကျနော့်မိန်းမပန်တီလေးတွေတွေ့တော့ ” ဟာ…လှလိုက်တာကွာ” ဆိုပြီး သူကိုင်ကြည့်တယ်။ ကျနော်ကလဲမိန်းမကို ပန်တီလှလှလေးတွေဘဲဆင်တယ်(ပန်တီခရေဇီကိုးးးးဟီး)။ သူအပေါ့သွားပြီး ပြန်ထွက်လာတော့ ကျနော်အပေါ့သွားတယ်။ အိမ်သာတံခါးကြားကနေ ကြည့်လိုက်တာ ဒီကောင် မိန်းမရဲ့ပန်တီလေးကိုယူပြီး နမ်းနေတာ တွေ့ရတယ်။ သူရှက်သွားမှာဆိုးလို့ ကျနော်လဲ အိမ်သာထဲအသာထိုင်နေတာပေါ့။ ကျနော်ကျနော့်မိန်းမကိုအရမ်းချစ်တယ်။
ချစ်လို့ သူ့ကိုသွေးနဲ့သားနဲ့ တည်ဆောက်ထားတာဘဲ ဆိုပြီး ကိုယ်ချင်းစာနားလည်ပြီး သူများနဲ့ တခါတလေ ပျော်စေချင်မိတယ်ဗျာ။ တခါတလေမှာအဲ့လိုမျိူးတေ အရမ်းစိတ်ဝင်စားမိတယ်။ ဘယ်သူနဲ့ လွှတ်ပေးရမှန်းလဲမသိဖြစ်နေတာပေါ့လေ (တခုခုဖြစ်မှာလဲ ကြောက်တာကိုး)။ အမြဲတန်း တခုခုလုပ်ပေးဘို့လဲ ကြံနေမိတာအမှန်ပါ။ မိန်းမကိုလဲ တခါတလေပြောပြမိပါတယ်။
အဲ့ဒါနဲ့ကျနော်သောက်နေရာကနေထပြီး မိန်းမအင်္ကျီလဲတဲ့ အိပ်ခန်းလေးထဲကို ထလိုက်သွားမိတော့တယ်။ မိန်းမက ထမိန်လေးရင်ရှားပြီး အပေါ်အင်္ကျီရှာနေတာ ထင်ပါတယ်။ “မိန်းမ…ည၀တ်အင်္ကျီဖဲသားလေးဝတ်လေ” ဆိုပြီးပြောတော့ “အော်…ကိုကလဲကို့သူငယ်ချင်းရှိနေတာ ရှက်စရာကြီး” “ဘာလို့ရှက်ရမှာလဲ.. တခါ မင်းကိုပြောဘူးတယ်လေ.. ဒီကောင်က မင်းပန်တီတွေတောင် လှလို့ဆိုပြီးပြောတာ.. ခိုးတောင်နမ်းသေး” “အခုလိုကြီးသူ့ရှေ့ပါးပါးလေးနဲ့နေရမှာ ရှက်တာပေါ့” “အောက်ကပန်တီနဲ့ဘရာမချွတ်နဲ့ ဒီအတိုင်း ထပ်ဝတ်လိုက်” “ဟင်…ဖြစ်ပါ့မလား..အကုန်မြင်နေရမှာပေါ့” “ရပါတယ်…ပြောသလိုဝတ်ခဲ့…စောင့်နေမယ်” ဆိုပြီးကျနော်ပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။ ကျနော်လဲ သူငယ်ချင်းနဲ့စကားထိုင်ပြောသောက်နေရင်း ၅မိနစ်လောက်နေတော့ မိန်းမက ပန်းရောင် ည၀တ်အကျီဖဲသားပါးပါးလေးနဲ့ထွက်လာတယ်။
အနားရောက်လာတော့ သူ့အောက်က ပန်တီအနီလေးကလဲ ထင်းလို့… ဘရာအနက်လေးကလဲ အပေါ်မှာ အစွန်းလေးတောင် ထွက်နေသေး။ သူငယ်ချင်းရဲ့မျက်လုံးတွေခိုးခိုးပြီးကြည့်နေတာ ကျနော်မပြောဘဲသိနေတယ်လေ။ ဒါပေမယ့် သူက မသိသလိုတော့နေနေတယ်။ အဲ့တာနဲ့ ဆက်သောက်ကြရင်း ကျနော်လဲ အတော်မူးနေပြီ…. ဒီကောင်လဲမူးနေပြီ။ “ငါအိပ်ချင်ပြီကွာ…သွားအိပ်ကြရအောင်” ဆိုတော့… “ဒီခုံပေါ်မှာဘဲအိပ်တော့မယ်” တဲ့။ “မလုပ်နဲ့…အိမ်ပေါ်ခန်းသွားအိပ်ရင်အိပ်… မအိပ်ရင် ငါတို့နဲ့လာအိပ်” “မအိပ်ဘူး…ဆက်သောက်မယ် ” တဲ့ဆိုပြီး ဆက်သောက်တာ နာရီဝက်လောက်ကြာတော့ ဒီကောင်မှောက်ရော… “မိန်းမရေ အိမ်ပေါ်တော့ ငါလဲမနိုင်ဘူး… ဒီမှာဆိုလဲ အိပ်ရတာ ဒီကောင်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူး ငါတို့အခန်းထဲမသွားရအောင်” ဆိုပြီးပြောလိုက်တယ်။
အဲ့ဒါနဲ့နှစ်ယောက်သားမပြီး အခန်းထဲ ဒရွတ်တိုက်ဆွဲလာရတာပေါ့။ ကျနော်တို့ကုတင်ပေါ်တင်ပြီး ကုတင်ဒေါင့်စွန်းမှာ နေရာချပေးလိုက်တယ်။ ကျနော်လဲ ကုတင်ပေါ်လှဲချရင်း “မိန်းမအိပ်လေ” ဆိုတော့ “ဘယ်မှာအိပ်ရမှာတုန်း…သူ့ဘက်တိုး” ဆိုတော့….ကျနော်လဲမူးမူးနဲ့မိန်းမကို ပျော်စေချင်တဲ့ စိတ်နဲ့ပြောလိုက်တယ်။ “ခလယ်မှာဝင်အိပ်လိုက်ကွာ” “ဟာ…အိပ်ချင်ပါဘူး…သူအိပ်နေတာနဲ့ ကပ်နေမှာပေါ့” “လာပါကွာမိန်းမကလဲ… သူမူးပြီးအိပ်နေတာ ဘာမှဖြစ်ဘူး” မိန်းမလဲကျနော့်ပြောမရတဲ့အဆုံး နှစ်ယောက်ခလယ်မှာ ၀င်လှဲလိုက်တော့တယ်။ မိန်းမဘက်ကို လှည့်ဖက်ထားရင်းး ကျနော် အိပ်ပျော်သွားလိုက်တာ ခေါခေါဘဲ (မိန်းမကနောက်မှပြောပြတာ) ကျနော် အိပ်နေရာကနေ ဇပ်ခနဲဆို အသံလေးတွေကြားလို့ မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်တော့ အခန်းကမှောင် (နဂိုထဲက မီးကပိတ်ထားတာ.. အပြင်ကမီးရောင်ကြောင့် နဲနဲမြင်ရတယ်) သိပ်တော့ သဲသဲကွဲကွဲမမြင်ရဘူးပေါ့။ အသာလေး ခေါင်းစောင်းကြည့်တော့ မိန်းမက သူငယ်ချင်းဘက်ကိုယ်လုံးစောင်းပြီး နေတာတော့ သိလိုက်တယ်။
…ပြွတ်..ပြွတ်..ပြွတ်…. (သူတို့ကစ်စင်ဆွဲနေတာဆိုတာသိလိုက်ပြီ) မိန်းမရဲ့ ကိုယ်လုံးတစ်စောင်းလေးရဲ့ ဖင်နေရာလေးက ကော့ကော့ပေးသလို လှုပ်နေတာ တွေ့နေရတယ်။ ကျနော်လဲ သဘောပေါက်ပြီးဖီးတွေတက် ကျနော့လီးက တောင်လာပါလေရော… (မိန်းမကို အရင်ထဲကပျော်စေချင်ခဲ့တာကိုး) မိန်းမက တစ်စောင်းလေးကနေ ပက်လက်ကလေး ပြောင်းလိုက်တာတွေ့ရတယ် (အမှောင်ထဲမှာဆိုတော့ ကျနော်ကြည့်နေတာ မတွေ့ရဘူးပေါ့) အဲ့ဒါကို သကောင့်သားသူငယ်ချင်းက ခေါင်းလေးကြွပြီး မိန်းမအကျီလေးအပေါ်ကနေ နို့တွေကိုနယ်နေတယ်။ ပြီးတော့ မိန်းမအကျီကို လှန်တင်ပြီး ဘရာလေးပေါ်ကနေ နယ်နေလေရဲ့။ ပြီးတော့ စကားသံလေးတခုသူကပြောတာ ကြားလိုက်ရတယ်။
” ဘရာစီယာလေးချွတ်လိုက်ပါလား ” ကိုယ့်မိန်းမကလဲ ထန်နေပြီထင်ပါတယ် လက်နောက်ပြန်ပြီး ဘရာချိတ်ကလေးကို ဖြုတ်ပေးနေတယ်။ ချွတ်ပြီးသွားတော့ မိန်းမရဲ့နို့လေးတွေကို အငမ်းမရစို့နေတာ တပြွတ်ပြွတ်နဲ့ အသဲယားပြီးဘယ်လိုကြီး ကျနော့်စိတ်ထဲ ဖြစ်နေမှန်းကိုမသိဘူးဗျာ။ လက်ကလဲ မိန်းမရဲ့အဖုတ်ကိုပွတ်နေတာလား နှိုက်နေတာလား မသိရဘူး၊ အဲ့နေရာမှာ လှုပ်ရှားနေတာတော့ သိနေတယ်။
မိန်းမကလဲ တစ်အားအားနဲ့ သူ့ကိုယ်လုံးလေးက လှုပ်နေတာတော့ မြင်နေရတယ်.. ကျနော်လဲ..ကြိတ်မနိုင်ခဲမရဖြစ်ဘာလုပ်လို့ ဘာလုပ်ချင်မှန်းမသိနဲ့………. ” အင်းးးးး ချစ်ရေ….ချစ်ရေ..ဘယ်မှာလဲ” ဆိုပြီး ဘာမှန်းမသိယောင်သလို ပါးစပ်က ထွက်သွားမိတယ်။ သူတို့လဲ အသာလေးငြိမ်ပြီး ရပ်နေတယ်။ မိန်းမဘက်ကို ကျနော်ကလှည့်ပြီး ဖက်လိုက်တော့ မိန်းမကအသာလေး ငြိမ်နေတယ်လေ။ ကျနော်လဲ သူများကမိန်းမကို နှူးနှပ်နေတာတွေ ဖီးအရမ်းတက်ပြီး တောင်နေတဲ့လီးက မနေနိုင်တော့ဘဲ ထပြီး (အဲ့အချိန်ထိ ကျနော်လဲအရက်ရှိန်ကရှိပြီးမူးနေတုန်း) မိန်းမစောက်ပတ်လေးကိုအတင်းကုန်းယက်တာ မိန်းမက အတင်းပေါင်ကိုစိထားတယ်။
(သူက အရည်တွေထွက်နေတာရှက်လို့တဲ့ နောက်မှပြောပြတာ) ကျနော်လဲအတင်းပေါင်ကိုဖြဲပြီးလက်နဲ့ နှိုက်ကြည့်တော့ အရည်တွေကိုစီးပိုင်နေတာဘဲဗျာ။ ကျနော်လဲ မနေနိုင်တော့ဘဲ သူ့ပေါင်လေးကို အတင်းဖြဲပြီး တက်လိုးတော့တာပေါ့။ လူကအရမ်းကို တင်းနေပြီ။ အတင်းစောင့်လိုးနေရင်း… ခနနေတော့.. ” မိန်းမမှောက်လိုက်ကွာ” ဆိုပြီး မှောက်ခိုင်းလိုက်တယ်။ မိန်းမက မှောက်ရက်လေးလုပ်ပေးတော့ ကျနော်ကနောက်ကနေ ထဲ့ပြီး တချက်ခြင်းလိုးနေတာပေါ့။ နဲနဲကြာလာတော့ မိန်းမခေါင်းကို သူငယ်ချင်းပေါင်ပေါ် အတင်းရွေ့တင်ပေးလိုက်တယ်။ မိန်းမက သူငယ်ချင်းပေါင်ပေါ်မှာအသာလေး မှိန်းနေတယ် (သူငယ်ချင်းကတော့ ကြောက်လို့လားသိဘူး အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်နေတာပေါ့… လီးကတော့ တောင်ပြီးထောင်မတ်နေတာအသဲယားစရာ) စကားမစပ်…. *သူငယ်ချင်းလီးက ကျနော့်ထက် အများကြီးကြီးတယ်ဗျ…
အသာလေးမိန်းမကိုနောက်ကညှောင့်နေရင်း မိန်းမလက်ကိုယူပြီး သူငယ်ချင်းလီးပေါ် တင်ပေးလိုက်မိတယ်။ နဂိုထဲက သူငယ်ချင်းကလိလို့ ထနေပြီးသား မိန်းမဆိုတော့ သူလဲမရှက်တော့ဘဲ လီးကိုအသာလေး ဂွင်းတိုက်ပေးနေတယ်။ ကျနော်လဲအဲ့လိုလုပ်ပေးနေတာကိုကြည့်ရင်း အရမ်းဖီးတွေတက်လာတော့တာပါဘဲ နောက်ကနေ ညှောင့်နေရင်းမိန်းမခေါင်းလေးကိုကိုင်ပြီး သူငယ်ချင်းလီးပေါ် သူ့ပါးစပ်လေးနဲ့ တေ့ပေးလိုက်မိတော့တယ်။ မိန်းမကလဲ ပထမတော့ငြိမ်နေတာပေါ့။ ခနနေတော့ တစ်ပြွတ်ပြွတ်နဲ့လီးကြီးကို စုပ်ပေးနေတာ တွေ့ရလေ သူ့စောက်ဖုတ်လေးကို ပိုစောင့်လေဖြစ်ပြီး ကျနော်လဲ ပြီးသွားတော့တာပေါ့။
ကျနော်တို့လင်မယား၂ယောက် အိပ်ယာပေါ်ကဆင်း ရေသွားဆေးကြတယ် (ကျနော်လဲ ဘာမှတော့မမေးဘူး) သူငယ်ချင်းကတော့ အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်ကောင်းနေတုန်းဘဲလေ။ အိပ်ယာပေါ်ပြန်ရောက်တော့ အရင်ပုံစံအတိုင်း ပြန်အိပ်ကြီပြီးလှဲရာကနေ ကျနော်မောပြီး ပြန်အိပ်ပျော်သွားပြန်ရော။ ဘယ်လောက် ကြာသွားတယ်တော့မသိဘူး။ အသံတွေကြားပြီး ပြန်နိုးလာသလိုဖြစ်ပြန်ရော။ အသာလေး နားစွင့်နေမိတယ်။ မိန်းမကပြောသံစကြားမိတယ်။ ” နို့တွေအရမ်းကြိမ်းနေပြီ မစို့နဲ့တော့ ” တဲ့ ” ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ” သူငယ်ချင်းကပြန်ပြောတယ်။ မိန်းမလဲ ဘာမှပြန်မပြောဘဲနေတော့ သူငယ်ချင်းက မိန်းမခေါင်းကိုကိုင်ပြီး သူ့လီးရှိတဲ့နေရာကို အတင်းရွေ့ပေးလိုက်တာ တွေ့လိုက်တယ်။
မိန်းမလဲ သူ့လီးကိုအတင်းစုတ်နေတာ အားရပါးရပါဘဲ (ကျနော့်လီးတောင် အဲ့လောက်မစုတ်ပေးဖူးဘူး… တကယ်ပါ) ” အား…..ကောင်းလိုက်တာ ” လို့ သူငယ်ချင်းကအော်တာကြားလိုက်တယ်။ ပွတ်…ပြွတ်…ပြွတ်…. “တကယ်ကောင်းတာလား..မခံဘူးဘူးလား” လို့ မိန်းမကပြန်ပြောတယ်။ “တကယ် အခုလိုမကောင်းဘူးဘူးကွာ… အရမ်းကောင်းတယ်.. အဖုတ်လေးကလဲ ကိုင်လို့ကောင်းလိုက်တာ” လို့ သူငယ်ချင်းကပြန်ပြောတာကြားမိတယ်။ “ဒါဆိုညိမ်ညိမ်နေ…ကော့ကော့မနေနဲ့ စုပ်ပေးမယ်… ဟိ… သူ့ဟာကြီးကအကြီးကြီး…ပါးစပ်တောင် ညောင်းတယ်” ဆိုပြီးမိန်းမကပြန်နောက်သလို ပြောနေတာ… ကျနော်လဲ လီးကပြန်တောင်လာတယ်။
ဒါပေမယ့် ဘာဆက်ဖြစ်မလဲညိမ်နေလိုက်တယ်။ မိန်းမလဲ သူ့လီးကြီးကိုဆက်စုပ်ပေးရင်း ၅မိနစ်လောက်ကြာတော့ “တော်ပြီ ” ဆိုပြီး ပက်လက်လှန်ချလိုက်တယ်။ သူငယ်ချင်းက မိန်းမကိုလိုက်ဖက်ရင်း ကစ်ဆင်ဆွဲနေတယ်။ ပြီးတော့ မိန်းမကတစ်ဖက်စောင်းရင်း ကျနော့်ဖက်လှည့်နေတယ်။ သူငယ်ချင်းက နောက်ကနေလီးနဲ့ထောက်ထားတယ် ထင်ပါတယ်။ မိန်းမနို့တွေကို နယ်နေတာတော့တွေ့တယ်။ နောက်ကဖက်ရင်းပေါ့။ သူငယ်ချင်းက…. ” အရမ်းလိုးချင်တယ်ကွာ” ဆိုပြီးပြောလိုက်တာကြားရတယ်။ ” လိုးချင်လိုးလေ ” ဆိုပြီးမိန်းမကပြန်တာ ကြားတယ်။
“လိုးလို့ဖြစ်ပါ့မလား..သူနိုးလာရင်ဒုက္ခ” ဆိုပြီး သူငယ်ချင်းကပြန်ပြောတယ်။ “ကြောက်နေရင်လဲ အိပ်တော့မလုပ်နဲ့” ဆိုပြီးမိန်းမက ပြန်ပြောတော့… “ဖင်ကိုနောက်နဲနဲကော့ပေး… နောက်ကထည့်မယ်” “အားးးးး နာလိုက်တာ..ဖြေးဖြေးထည့်လေ” ဆိုပြီး မိန်းမအော်လိုက်တာကြားရပြန်ရော.. ဖပ်…ဖပ်…ဖပ်… “အားးးးးးးကောင်းလိုက်တာကွာ… အဖုတ်လေးက အရည်တွေနဲ့စည်းနေတာဘဲ” “အားးးးးမောင်ရယ်…ဖြေးဖြေးလုပ်ပါ” (မိန်းမက နောက်မှပြောပြတာ.. သူလဲ ဖီးအရမ်းတက်ပြီးခေါ်မိခေါ်ရာ ခေါ်လိုက်မိတယ်တဲ့) “သဲ…မောင်လိုးပေးတာကောင်းလား..” “ကောင်းတယ်မောင်ရယ်..
ဘယ်လိုကြီးမှန်း မသိဘူး.. ပြည့်ကြပ်နေတာသလိုဘဲ” “မောင့်လီးနဲ့ဟိုကောင့်လီးဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲ…” “တစ်မျိုးစီဘဲ..ဒါပေမယ့် မောင့်လီးကပိုကြီးပြီး တင်းနေတာဘဲ..” “အမြဲလိုးရရင် ကောင်းမယ်ကွာ… အရမ်းကောင်းတယ် သဲရယ်..” “ဘာ သဲ လဲ…” “ဟုတ်တယ်လေ…အခုလိုးနေရတာ မောင့်အသဲပေါ့… အား…..ကောင်းလိုက်တာ” “သဲ ပက်လက်လှန်လိုက်မယ်… မောင်အပေါ်က တက်လုပ်ပေး…” “ဟာ..ဖြစ်ပါ့မလား..ဟိုကောင်နိုးလာရင်ဒုက္ခ..” “မောင် ကြောက်ရင်လဲ မလုပ်နဲ့တော့လေ….” “လုပ်ချင်သေးတယ်ကွာ..ဒါဆို… ပက်လက်လှန်ထားမယ်…. သဲအပေါ်က တက်စောင့်ပေးပါလား…” “ပြီးရော…ပက်လက်လှန်လိုက်” မိန်းမကသူငယ်ချင်းပက်လက်လှန်ထားတဲ့ လီးကြီးကို တက်မထိုင်သေးဘဲလီးကိုကိုင်ပြီး အတင်းစုပ်နေတာ တွေ့ရတော့ လူကိုဘယ်လိုဖြစ်သွားမှန်း မသိပါဘူးဗျာ။ ပြီးတော့ သူတက်ခွပြီးထိုင်လိုက်တာ တွေ့လိုက်ရတယ်။
“အား….မောငျရယျ..ကွီးလိုကျတာ..” “မကောင်းဘူးလားသဲ..” “ကောင်းတယ်…အရမ်းထိတယ်… မောင်ရောကောင်းလား…” “အရမ်းကောင်းတယ် သဲရယ်… အရမ်းစောင့်ကွာ.. ပြီးချင်နေပြီ..” “ဒါဆိုလဲ မောင်ပြီးလိုက်တော့လေ… ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲ..” “အနောက်ကနေလိုးချင်တယ်ကွာ… ဟိုကောင် နိုးသွားမှာလဲကြောက်နေတာ… အိမ်ရှေ့ဆက်တီမှာ သွားလုပ်ရအောင် သဲ..” သူငယ်ချင်းကအသာလေးထပြီးမိန်းမကို လက်ကလေးဆွဲကာ တံခါးအသာလေးဖွင့်ပြီး ထွက်သွားကြတယ်လေ။ ကျနော်လဲ ခနလေးနေပြီး တံခါးကိုအသာလေးတွန်းကာ လိုက်ထွက်ပြီး ဘီရိုအကွယ်လေးကနေ သွားချောင်းနေမိတယ်။
၂ ယောက်သား ဘေးခြင်းယှဉ်ထိုင်ရင်း စကားတွေ ပောနေကြတာကြည့်ရင်း ကိုယ့်လီးကို ကိုယ်ကိုင်နေမိတယ်။ “သဲ အဖုတ်လေးကလိုးလို့ကောင်းလိုက်တာ… ဘယ်လိုလုပ်ထားတာလဲ” “ဟင်…ဘယ်လိုလုပ်ထားရမှာလဲ… ဒီတိုင်းဘဲကို..” “စီးပိုင်နေတာဘဲ သဲရာ…” “သူ့ဟာကြီးက အကြီးကြီးကျတာ့မပြောဘဲ…” “သဲ ခံလို့မကောင်းဘူးလား….” “ကောင်းသပရှင်ကောင်းသပ…ဟင်း… ကျိန်းနေတာဘဲ..” “အမြဲလိုးချင်တယ် သဲရာ….” “ဒါဆိုလဲ မိနျးမယူလိုကျပါလားးး…ဟီး…” “ဒီ အဖုတ်လေးကိုလိုးချင်တာ…ဟိ …” ဟုပြောရင်းမိန်းမအဖုတ်လေးကို လှမ်းကိုင်လိုက်တာ တွေ့လိုက်ရတယ်။ အိပ်ချိန်သိတ်မရှိတော့ဘူး။ “လုပ်ရင်လဲ လုပ်တော့ပြီးလိုက်တော့” ဟု မိန်းမကပြန်ပြောလိုက်တယ်။ “ဒါဆို ခုံပေါ်မှာလေးဘက်ထောက် နောက်က လိုးမယ်…”ိမိန်းမလဲဆက်တီဆိုဖာပေါ်လေးဘက်ကုန်းပြီး ကော့ပေးထားတာ တွေ့လိုက်ရတယ်။
သူငယ်ချင်းက သူ့လီးကိုအဖုတ်နုတ်ခမ်းနားတေ့ပြီး ဂွင်းခဏထုနေတယ်။ ပြီးတော့ အရည်တွေစိုရွှဲနေတဲ့ မိန်းမရဲ့အဖုတ်လေးထဲကို စောင့်ချလိုက်တာ…. “အားး…မောငျရယျ..” “ကောင်းလားသဲ…” “အရမ်းစောင့်လိုက်မောင်…အရမ်းကောင်းနေတယ်” ဘွတ်….ဘွတ်…ဘွတ်…ဘွတ်… ဆိုတဲ့အသံတွေတောင် အခန်းထဲဆူညံနေတာပါဘဲဗျာ။ “အားး…. ကောင်းလိုက်တာ သဲရယ်… မောင် ဘယ်လိုပြီးရမလဲ…အထဲထဲ့လို့ရလား..” “မထဲ့နဲ့မောင်…ပြီးခါနီးမောင့်ဟာကြီးကို စုပ်ပေးမယ်.. ပါးစပ်ထဲမှာပြီးလိုက်” ဟုမိန်းမက လှည့်ပြောတာကြားလိုက်ရတယ်။ “အား….ပြီးတော့မယ်…ပြီးတော့မယ်….” ဟု သူငယ်ချင်းကပြောရင်း သူ့လီးကို အဖုတ်ထဲကထုတ်ကာ မိန်းမပါးစပ်နားတေ့ပြီး “အားး အားးး အား… ပြီးပြီ ပြီးပြီ..အား… ကောင်းလိုက်တာသဲရယ်” ဟုပြောရင်း လီးရည်တွေကို ပန်းပန်းထုတ်နေတာ တွေ့လိုက်ရတယ်။ သူတို့မထခင် ကျနော်လဲ အမြန်အခန်းထဲပြန်ဝင်ပြီး အိပ်ချင်ယောင်ဆောင် နေလိုက်ရတာပေါ့။ သူတို့ရေတွေဘာတွေဆေးပြီး အခန်းထဲပြန်ဝင်လာတော့ မိန်းမကခလယ်မှာ သူက ဟိုဘက်မှာဘဲပြန်လှဲရင်း ဖက်အိပ်နေကြတာ တွေ့လိုက်ရတယ်ဗျာ။ ပြီးပါပြီ